WAR CUSUB: Morata oo Dareensan inay si Xushamad Darro ah ula dhaqantay Chelsea, wuxuuna doonayaa inuu TALAABADAN qaado Bishan si uu uga Aarguto!! – Gool FM
(London) 06 Jan 2018. Alvaro Morata ayaa dhaliyay labadii gool ay Chelsea xalay uga adkaatay naadiga Nottingham Forest oo ay ugu soo gudbeen wareega 4-aad ee tartanka FA Cup.
Balse dhaliyaha reer Spain uma dabaal degin labadii gool uu dhaliyay maadaama uu dareensan yahay in si xushmad darro ah ay ula dhaqantay Chelsea wuxuuna eeganayaa inuu bishan ka tago Stamford Bridge si uu ugu biiro Sevilla oo ka mid ah kooxaha doonaya.
Sida uu warinayo warsidaha Caanka ah ee Marca, in Morata uusan xitaa dhoola caddeyn markii uu goolasha dhaliyay ay sabab u tahay inuu aamisan yahay in xushmadii uu mudnaa uusan ka helin kooxda Chelsea.
Waxaa la arkaa inay taa ugu wacan tahay wada hadalada Chelsea ay baadi goobka ugu jirto Weeraryahan Cusub isagoo kooxda xaadir ku ah maadaama ay ka niyad dhigeen 26-jirka reer Spain.
Weeraryahanka Bournemouth Callum Wilson iyo midka AC Milan Gonzalo Higuain ayaa ka mid ah xiddigaha bartilmaameedka u ah Blues.
Marca ayaa sheegaysa in Sevilla ay ka mid tahay kooxaha ay suuro galka tahay inuu ku biiro laacibkii hore ee Real Madrid.
Kooxaha ka wada dhisan Jarmalka ee Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ayaa sidoo kale xiiseynaya Morata, mana ahan markii ugu horreysay ay kooxda dambe ka faa’iideysato weeraryahan ku dhibtoonaya Chelsea.
Michy Batshuayi ayaa wajiga labaad ee kal ciyaareedkii tagay amaah ku soo qaatay Dortmund wuxuuna u dhaliyay 7-gool 10-kulan uu u saftay kaddib bilow adag oo Chelsea ku qaatay.
Manchester City oo Goolal Roobka uga dhigtay Rotherham United....(Goolasha oo la kala qeybsaday)+SAWIRRO